Wasiirka Maaliyadda iyo Duqa Muqdisho oo maanta xariga ka jaray xarumo canshuuraha lagu qaadi doono (SAWIRRO) | HalQaran.com
Wasiirka Maaliyadda iyo Duqa Muqdisho oo maanta xariga ka jaray xarumo canshuuraha lagu qaadi doono (SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Cabdi Raxmaan Ducaale Beyle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud (Cumar Filish) ayaa si Wadajir ah xariga uga jaray xarumaha canshuuraha.
Wasaaradda Maaliyadda dalka ayaa dhismaha xarumahaan ka hirgalisay degmooyinka Hodan iyo Howl-Wadaag.
Xarumahaan ayaa looga faa’iideysan doonaa arimaha la xiriira qaadista canshuuraha ku waajibay muwaadiniinta ku nool caasimadda dalka, si dalku u sameyo horumar dhaqaale.
Wasaaradda maaliyadda dalka ayaa sanadihii u dambeeyay laba jibaartay dadaalkeeda ku aadan dib u dhiska xarumihii u gaarka ahaa arimaha canshuuraha.
Wasiirka Maaliyadda Beyle iyo Duqa Muqdisho oo xariga ka jaray
xarumo canshuuraha lagu qaadi doono